Uhlalele ovalweni osinde edutshulwa amaphoyisa eHammersdale | Eyethu News
Uhlalele ovalweni osinde edutshulwa amaphoyisa eHammersdale
“Amaphoyisa kuthiwa abecwile ezinkanjini zikaFaro.”
KUSENZIMA nokuthi akhulume ngesigameko esimehlele owesilisa oneminyaka engama-23 osinde kukubi amaphoyisa ezama ukumqotha ngenhlamvu kodwa amugeja ngesonto eledlule.
Lona wesilisa waseMpumalanga Unit 3 igama lakhe esiligodlile, kuthiwa ubethi uyovala isango ngesikhathi ebona imoto iza ngejubane kuyena yabe isivulela ngenhlamvu.
Lemoto kuthiwa ibihamba amaphoyisa amathathu nokusolwa ukuthi abecwile ezinkanjini zikaFaro nezintombi zawo njengoba kade ezivakashele kuyona lendawo.
Kuthiwa isizathu esenze ukuba lamaphoyisa avulele ngenhlamvu ingoba abemufanisa lomfanyana nomunye oke wazama ukubamba inkunzi.
Ngokusho kwelunga lomndeni walomfana nalo esiligodlile igama lalo, lithi kuyabaxaka loku okwenzekile ngoba umfana wabo ubehleli endlini ebuke umabonakude akakaze aphume njengoba sebemusola ngokubabamba inkunzi.
“Ingane ibiyovala isango njengenjwayelo, sizwe sekuqhuma isibhamu sasaba ngisho ukuphuma besizitshela ukuthi ingane isishonile ngoba kuthathe isikhathi eside ingangeni endlini nathi sisaba ukuphumela emnyango.
Kusithuse kakhulu ukuzwa ukuthi ngamaphoyisa lawa abehlasela egcekeni, ingane ithe ibone ngemoto iqonda-ngqo esangweni kwaphuma abalisa ababili bathi “wenja woza la” emva kwalokhu ithe bavulele ngenhlamvu,” kuchaza ilunga lomndeni.
Liqhubeke lathi sebehlalele ovalweni ngoba abazi noma basazobuya yini nokuthi kuzokwenzakalani njengoba sebevule necala. Uphinde waveza ukuthi isisulu kuze kube imanje sisathukile kangangokuba sesiba ngisho ukudayisa esitolo njengoba kade senza ngaphambi kokuba sidutshulwe.
Uphethe ngokuthi amaphoyisa yiwona okufanele avikele umphakathi ayilento ayenzayo yokuhlasela abantu emzini yabo nokuthi azehlise isithunzi aphuze namantombazane angawazi.
Umphathi siteshi samaphoyisa aseMpumalanga uColonel Sipho Nkomo usiqinisekisile lesi sigameko washo nokuthi icala selidluliselwe kwi- Internal Police Investigation Directorate (IPID) okuyibona abaphenya izindaba zokukhohlakala kwamaphoyisa.
Kudonswe abesifazane ngendlebe eMgungundlovu